Posted by eros on Jun 22, 2011 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, Think Different | 17 comments
ယခုခေတ်အခါတွင် စားစရာများတွင် ဘေးဖြစ်စရာ ပိုလာသည် eros ထင်မိသည်။ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးဖြစ်လိုက်၊ ၀က်နားရွက်ပြာဖြစ်လိုက်၊ နွားရူးရောဂါဖြစ်လိုက် စုံနေပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အသီးအရွက်စားလျှင် ဘေးကင်းပါပြီလား။ ကြည့်ကြပါစို့ရယ်။ ယခင်သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်းသို့ ခဏခဏရောက်ဖူးပါသည်။ သင်္ဘောသီး သရက်သီးများကို ဆိုးဆေးအရည်တွေ နှင့် အရောင်လှအောင် မှည့်အောင်လုပ်လေသည်။ နာနတ်သီးကို အရောင်လှအောင် ဆေးရည်စိမ်သည်။ ဈေးသည်တယောက်ပြောသည့် စကားအရ နာနတ်သီးအား အရောင်လှစေရန် ဒံပေါက်ဆေးရည်စိမ်ပါသည်တဲ့။ ဒံပေါက်ဆေးရည်သည် မီးအပူနှင့်မထိတွေ့ပါက ဘေးဖြစ်စေသည်။ ဟုတ်မဟုတ် အသာထားပြီး ထိုဆေးရည်ကို အ၀တ်ဆိုးဆေး ဆေးရည်သုံးလိုက်ပါက….. ။ အမှန်တကယ်လည်း အ၀တ်ဆိုးဆေးများသုံးနေလေ့ရှိသည်။ ငှက်ပျောသီးသည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း၊ မျှစ်သည်လည်း ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ မုန်လာဥများသေးသေးကွေးကွေးများကို ဓာတ်မြေသြဇာရည်စိမ်ထားသော အ၀တ်ဖြင့် တညအုပ်လိုက်ပါက နောက်နေ့မနက်တွင် အံ့ဖွယ်အသီးအကြီးကြီးများဖြစ်လာလေသည်။ စိုက်ခင်းထဲတွင် မြေသြဇာ၊ပိုးသတ်ဆေး အမျိုးမျိုးသုံးသည်။ ပိုကျွေးလျှင် ပိုထွားမည်ဆိုပြီး များများစားစား သတ်မှတ်ထားသည်ထက်ပိုပြီးကျွေးသည်။ ဆေးဓာတ်မပျယ်ခင်တွင် ဈေးသို့သွားရောင်းသည်။ ဒီကြားထဲ ဆိုင်က မုန်လာဥဖော်မြူလာ သုံးသောအခါ…..။
အသားစားခြင်းထက် အသီးအရွက်များများစားသဖြင့် အသက်ပိုရှည်နိုင်ကြောင်း ပြောသော်လည်း အသားများကား မလတ်လျှင်မ၀ယ်ရုံ။ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးဖြစ်လျှင် ကြက်သားမစားရုံ။ ၀က်နားရွက်ပြာဖြစ် ၀က်သား မစားရုံ။ နွားရူးရောဂါဖြစ် အမဲသား မစားရုံ။ သေသေချာချာ ရေစင်စင်ဆေး။ ကျက်အောင်ချက်စားလျှင် အိုကေပြီ။ အသားဈေးနှင့် အသီးအရွက်ဈေးက သိပ်မကွာပေ။ ထို့ကြောင့် အသားစားတာ အန္တရာယ်ကင်းလား အသီးအရွက်စားတာ အန္တရာယ်ကင်းလား။ အသားစားရင် ကောင်းမလား အသီးအရွက်စားရင် ကောင်းမလား။
ဘယ်နေရာမှာ edit လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိတာနဲ့ နောက် အသစ်တခု တင်လိုက်ရပါတယ် သူကြီးရေ။ အောက်က ပိုစ့်ကို ဖျက်ပြီး ပိုင့်ကို လျှော့ပေးပါဦး။
ကိုယ်တိုင် ခြံဝယ်စိုက်ပြီး ခူးစားပေါ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေး လည်း စားရပေါ့ကွယ်။
ပိုးသတ်ဆေး နိုင်နိုင် မဖြန်းနိုင်ခဲ့သော်.. ပိုးပေါက်နဲ့ လုံးဝ စားရမည် မဟုတ်ပါကြောင်း
ဘယ်လိုပဲ ကြည့်ကြည့် ဘာမှ မစားပဲ မနေနိုင်တော့ တခုခုတော့ စားရမှာပေါ့။
အသီးအရွက်လည်း မကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ရှိသလို အသားလည်း မကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။
အန်တီဆူး အနေ နဲ့ အခုလို အရွယ်တင် နုပျို သက်ရှည် ကျန်းမာနေတာ က တော့ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ အရွက် ( ကန်စွန်း ၊ ကိုက်လန် အစရှိသဖြင့် ) တွေ စားသုံးခဲ့လို့ နေမှာပေါ့နော် ။ ဟီဟိ
တို့တော့ ကန်ဇွန်းရွက်၊ ပင်စိမ်း၊ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်..စိုက်စားတယ်။ (ခေါင်ပေါ်တက်ပြီးတော့လေ။)
အန်တီမိုး စာအုပ်ထုတ်ရင် အားပေးချင်တယ် … ကျွန်မမှာ အသုံးမပြုဘဲပစ်ထားတဲ့ ၀ရန်တာတစ်ခုရှိတယ် …
အောက်က Linksတွေ ကလစ်ကြည့်ပါနော…kanjiနဲ့ဆိုတော့ တချို့စာတွေ နားလယ်ပါလိမ့်မယ်။
အသားစားတာလည်းမကောင်းပါဘူး … အသီးအရွက်ကျတော့လည်း ပိုးသတ်ဆေးကြောက်ရပါတယ်..။ ဟိုဆေးဒီဆေးတွေဖျန်းလို့ စိုက်ကြရောင်းကြတဲ့… အဲဒိတော့ ဘာမှမစားပဲနေလို့ရမဲ့ အဟာရ သိဒ္ဓိပြည့်နေတာပဲ ကောင်းမယ်နဲ့တူရဲ့…။ ကျွန်တော်တို့ဆီကမြေက ပျက်နေပြီ…။ မြေသြဇာမထည့်ရင် ပိုးသတ်ဆေးမဖျန်းရင်ဘာမှစိုက်မရတော့ဘူး..။ အဲဒါ ဈေးကောင်းရတယ်ဆိုပြီး ဖရဲ သီးလို အသီးအနှံတွေစိုက်ကြလို့ဖြစ်မယ် ထင်တာပဲ…. ။သူတို့က အပင်စပျိုးကတည်းက ပိုးသတ်ဆေး ပါရတယ်..။ ပိုးလည်းသိပ်ကြိုက်တယ်..။ ပိုးကျလွယ်တယ်..။
လူဆိုသော သတ္တ၀ါသည် (၀က် ကဲ့သို့) အစုံစားသတ္တ၀ါ ဖြစ်သတည်း
အသီးအရွက်ကလည်း.. ပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့… ဆိုတော့ကာ..
လောလောဆယ်တော့.. ဘာစားစား အန္တရာယ် သိပ်မကင်းလှဘူးထင်ပါတယ်..
လယ်ထဲသွား… ပိုးသတ်ဆေး မပါဘဲ စိုက်ခိုင်း…
အဲဒီ စပါးတွေ ကို စပါးကျီနဲ့ လှောင်ထား… အဲဒါကိုပဲစား..
လယ်ထဲသွား… ပိုးသတ်ဆေး မပါဘဲ.. မြေပဲတွေ စိုက်ခိုင်း..
အဲဒီ မြေပဲတွေကို ဆီကြိတ်ပြီး… ရာဝင်အိုးများနဲ့ လှောင်ကာထား..
စော..စောက ဆန်လေးကိုချက်…. ဆီလေးကိုဆမ်း…
အချို့သော စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေ ကြိုးစား စိုက်နေကြပါတယ်..
အဲဒီလို ခြံ တစ်ခု စိုက်ဖို့အတွက်… သူတို့ အတော်လေး ကြိုးစားရပါတယ်.
စားသုံးသူတွေ များလာရင်တော့ အဲဒီလို ခြံလေးတွေ ပေါများလာမှာပါ..
အဲဒီ အချိန်ကြမှပဲ.. ဓာတ်မြေသြဇာ… ဓါတုပိုးသတ်ဆေး သုံးစွဲထားခြင်း မရှိသော
သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့.. သီးနှံများကို ၀ယ်ယူအားပေးကြပါ…..
အိမ်က အမေကတော့ ဟင်းရွက်တွေကို ၀ယ်လာပြီးရင် ဆားနဲ့အရင် ဆေးပြစ်တာပဲ… ဓာတ်မြေသြဇာတွေ ပြယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ …
အခုလို မိုးရာသီမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကတော့ သေချာမဆေးလျှင် တီကော်တို့ ၊ကျွတ်တို့ ပါ အဆစ်ပါလာနိုင်တယ်… ။ သေချာဆေးပြီး ပူပူနွေးနွေးကြော်စားလျှင် အတော်စားလို့ ကောင်းတယ်….။
အသား၊ငါးကတော့ ကြောက်ချက်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထား ၊စားခါနီးပြန်နွေးရင် အလုပ်ရှုပ်သက်သာတယ်…. ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် နှစ်ခုစလုံး ကြုံသလို စားလိုက်တာပဲ ကောင်းတယ် ။
မဇ္ဈိမ ပဋိပဋာ ဆိုတာ ရှိတယ်လေ .. ဘယ်ဟာကိုပဲ စားစား သင့်တင့်မျှတအောင် စား
အ၀အပြဲ မစားနဲ့ .. သန့်အောင် ကိုင် .. ကျက်အောင် ချက် .. ပူပူနွေးနွေးစား ..
အသုတ်တို့ဘာတို့လို အစိမ်းစားရတဲ့ အစာဆိုရင် သန့်အောင်ထား .. ကိုင်တွယ်ဖို့ ..
အထူးအဆန်းတွေ သိပ် မစားဖို့ .. မကျက်တကျက်တွေ မစားဖို့ .. ဒါပါပဲ ..
ခုနောက်ပိုင်း အသီးအရွက်တွေကလည်း မြေသြဇာတွေနဲ့။
အစုံတော့စားရမှာပဲ။ အန္တရာယ်ကင်းအောင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဂရုစိုက်ရမှာပဲ။
အသီးအရွက်ချည်း စားနေလို့ အာဟာရ မလုံလောက်ဖူး ဆိုတာ မှားပါတယ် ..
အသားဓါတ် ဆိုတာ ပဲက ရတယ် .. ဗီတာမင်တွေက အသီးအရွက်တွေက ရတယ် .. အချိုဓါတ် အဆီဓါတ်ကလဲ အသီးက ရပါတယ် .. သက်သတ်လွတ်သမားတွေ လဲ အသက်ရှည်ကြ ကျန်းမာကြတာပဲ မဟုတ်လား .. စားတဲ့ ပုံစံ မှန်ဖို့သာ အရေးကြီးပါတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ အသားပဲစားစား..အသီးအရွက်ပဲစားစား.